Uma sikhuluma ukufakwa imishini eyengeziwe ngoba ingaphakathi semoto, abaningi bacabanga isihlalo esikhundleni ihlanganisa, ukuthengwa emaphaketheni ezihlukahlukene indwangu, nezinye izesekeli eziningi ezenza ukushayela imoto iba ngokunethezeka. Phakathi nenqwaba zinto ezidingekile ukwaba idivaysi kwandisa izinga lokuphepha emvelweni umshayeli nabagibeli bakhe. Lesi sihlungi gumbi. muva 2110, 2114, futhi abaningi nezinye izimoto zasekhaya waqala efektri unomsebenzi nangokubeka abaqaphi.
Lena akuyona element Tuning nemininingwane okunethezeka, kuyinto edingekayo okufanele abe khona kuwo wonke imoto yesimanje. Namuhla esinitshela ngalokho isihlungi gumbi nendlela kwenzeka.
Lapho eya salon ngezikhathi imoto ufake ezihlukahlukene izinto, okuyinto ngokuqinisekile akukhona amasosha omzimba zomzimba. Lezi kungaba uthuli komgwaqo, ukungcola, elimazayo intuthu, emapayipini , nokunye okuningi, esithinta kakhulu ukukhathala yomuntu, kanye isimo sakhe. Ngokusho ochwepheshe, gumbi isihlungi kunciphisa lokuhlushwa nitrogen oxide, formaldehyde kanye carbon monoxide emoyeni kokuvamile. Ngokocwaningo olwenziwa, umshayeli ngamunye inhales amagesi izikhathi 2 enkulu elimazayo kunokuba phezu komuntu ozihambelayo. Yingakho lemifanekiso gumbi kufanele ifakwe kuzo zonke imoto. Ngokuhamba yonke inkathi ukusebenza kwawo, nguye ngamaphesenti ayikhulu aqede intuthu eyingozi nothuli, okuye kwadingeka uthole ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, nedivaysi ezinjalo ngeke wesabe izintuli nokungcola nge isikhathi livela ku iphaneli sensimbi imoto ngayinye lapho egumbini isihlungi ayifakiwe. "Lanos", "Priora", "Vaz Kalina" - lokhu akulona uhlu oluphelele izimoto lapho ungafaka idivayisi.
Futhi uzinake Kuyaphawuleka ukuthi ukufakwa air ukuhlanzwa izinhlelo ku isiphephelo somoya emotweni (ohlangothini yokushayela) awaveli isehlukaniso ezinodaka, okuyinto ukunciphisa ukubonakala.
Namuhla isendalini kukhona izinhlobo eziningana mishini. Uthuli namalahle izinhlobo kufanele zabelwe phakathi kwabo. Esimweni sokuqala ka lemifanekiso kufaka izinto zokwenziwa nge izinto elwa namagciwane ukuthi ngokuphelele ukubhekana ngokuphumelelayo nothuli nempova. Uhlobo lwesibili has sakhiwo lesifanako, kodwa carbon yasebenza, lapho gumbi akuyona kwakheka le-carbon dioxide.
Ngokuvamile, usuku oluqondile inkonzo lemifanekiso abakhiqizi abonisa ku iphakethe. Ngokuvamile, bangamaphesenti emhlabeni izinkulungwane 5-10 amakhilomitha noma izinyanga ezingu-6 ukusebenza kwe-mshini. Kodwa kufanele sikhumbule lapha esikhundleni yomthombo ngo-50 per cent kuncike isimo ezithile zemvelo komuzi.
Ngokusekelwe lokhu, singakwazi kugcwale umlomo ukuthi lemifanekiso gumbi - idivaysi uletha izinzuzo ezingokoqobo umshayeli. Futhi musa skimp on kule yunithi, njengoba izinga abampofu ukuthenga uzoba nomthelela omubi empilweni yakho, okuyinto, njengoba yaziwa, ayikho imali engakwazi ukuzithenga.
Varicose emithanjeni ka ukhalo encane
I-CAD - imali yaseCanada